Språkstöd Fastighetsbyrån somaliska
Su’aal ma qabtaa? Waxan la imaw.
Shuqo xaq-kireysasho – Waxaad deggantahay shuqo waana kuu kireysanyahay deegaanku. Waxaa xitaa jira guri la kireeyo laakiin waxaa caadi ahaan badan in shuqo la kireeyo, si billa ahna lacag go’an loo bixiyo.
• Suuqa guryaha iyo heerarkiisa qiimaha ka hel sawir wanaagsan – Wax ka hel tirakoobka iyo xayeesiinta guryaha ee tusaale ahaan Hemnet.se, Maklarstatistik.se ama xafiisyada dallaalka bogaggooda intarneetka. • Hubi in aad heshid ballan qaad qoraal ah – Xagga maalgelinta guriga iyo xeerarka Swiidhan ka shaqeynaya kala hadal bangiyo kala duduwan. • Tag tusitaanno guryo oo fara badan – Booqo aagag deegaan oo kala duduwan, tagna tusitaanno fara badan si aad fikir uga heshid halka aad dooneysid in aad degtid iyo tilmaamaha aad dooneysid in uu gurigaaga mustaqbalku lahaado. • Xasuusnaw in beec dul dhigid aysan qofka xireynin iyo in aysan waxba dhammaannin inta iibsadaha iyo iibiyaha labaduba aysan heshiiska saxiixin. • Su’aalo fara badan dallaalka weydii, kana faa’iideyso aqoontiisa – Dallaalka Swiidhan waxaa isticmaala iibiyaha laakiin wuu dhawrayaa xitaa iibsadaha danihiisa. •Ha illoobin in aad baaritaan ku sameysid deegaanka – Swiidhan waxaa iibsadaha dul saaran waajib aad u weyn oo ah in uu wax iska baaro. Si sugan u baar guriga aad dooneysid in aad iibsatid, adeegsana haddii loo baahdo qof wax koontaroola. Haddii aad qorsheyneysid in aad iibsatid guri lahaansho qeyb ahaaneed ah waxaa xitaa muhiim ah in aad baartid dhaqaalaha ururka.